Pterostilbene Powder Benefits Dị ka Nootropics Na mgbochi ịka nká
Pterostilbene ntụ ntụ bara uru dị ka Nootropics yana Mmegide na-emegide ịka nká
1. Gịnị bụ Pterostilbene?
Pterostilbene bụ kemịkal dị mkpa nke ekepụtara n'oge ndụ ụfọdụ osisi dịka ụzọ isi lụso ọrịa ọgụ. Otutu a dika ogige ozo a maara dika Resveratrol ma di nfe na ntinye ihe ozo. Ihe mgbakwunye Pterostilbene bụ nnukwu ihe ọkụkụ. Nke a pụtara na ha nwere ike ịbanye ha n’ahụ ngwa ngwa na ngwa ngwa, enweghị mgbada na usoro mgbaze. Pterostilbene ntụ ntụ dịkwa mma, ma ọkara ndụ ya dị mkpụmkpụ ebe ọ bụ na ọ dị n'okpuru nkeji 100.
Pterostilbene isi mmalite nri
Pterostilbene ebe nri si gunyere bred breeki, almọnd, kranberị, mulberries, ahụekere, mmanya na-acha ọbara ọbara, mkpụrụ vaịn na-acha uhie uhie, akwụkwọ osisi grape, ogbugbo osisi kino Indian, red sandalwood, na koko. Agbanyeghị, bred bụ nri Pterostilbene kachasị elu, mana ọnụọgụ mkpụrụ osisi pọpụl nwere ka pere mpe ma e jiri ya na nri Pterostilbene. Ekwenyere na enwere ihe ndị na-acha anụnụ anụnụ nke pterostilbene dị na nanogram 99 ruo 52, na gram bred ọ bụla.
Usoro Pterostilbene dị iche na nke resveratrol. Pterostilbene compound bụ ihe kachasị ike Stilbene. Uru Pterostilbene dị iche iche na-arụkọ ọrụ kwekọrọ na usoro usoro dị iche iche. Omume ọgwụ nke trans-pterostilbene gụnyere antineoplastic, antioxidant, na mgbochi mkpali.
Pterostilbene na-egosi ọrụ antifungal dị irè nke nwere ike okpukpu iri karịa ike resveratrol. Pterostilbene na-egosipụtakwa nsonaazụ antiviral. Nchebe ahịhịa sitere n'ọtụtụ nje yiri ka ọ bụ usoro dị mkpa nke stilbenes, gụnyere Pterostilbene, ọrụ ndị a gbakwara anụmanụ na ụmụ mmadụ aka.
Pterostilbene na-egosikwa mmetụta anticancer site na ọtụtụ usoro molekụla. Nchọpụta emere nyocha Pterostilbene na -eme ihe bụ mkpụrụ ndụ ihe na - egbochi mkpụgharị mkpụrụ ndụ, mgbanwe nke ụzọ transduction ụzọ, oncogenes, mkpụrụ ndụ ihe dị iche, yana mkpụrụ ndụ ịhazi mkpụrụ ndụ.
Ngwongwo antioxidative nke Pterostilbene dị iche na nke resveratrol. Na resveratrol, otu hydroxyl atọ ahụ kewapụrụ ROS (ụdị oxygen na-emeghachi omume) na lymphoblasts dịpụrụ adịpụ na ọbara dum mgbe Pterostilbene, nke nwere 1 hydroxyl otu na ìgwè abụọ methoxy na-ebelata ROS extracellular. Ntughari nke ihe nke antioxidation na-enyere aka iji Pterostilbene ntụ ntụ iji mee ka ụdị oxygen oxygen extracellular extracellular, nke na-akpata mbibi anụ ahụ n'oge mbufụt na-adịghị ala ala.
N'okpuru ebe a, usoro pterostilbene dị iche iche nke ime ihe tụlere na nkọwapụta;
Usoro Pterostilbene nke ime ihe; Sirtuin ebighị
Pterostilbene na-akpali SIRT1 akara ngosi na mkpụrụ ndụ nke na-enye nchebe pụọ na mmebi cellular, si otú a na-arụ ọrụ. Nke a ụzọ boosts p53 okwu. P53 bụ protein na-echebe DNA megide mmebi ma na-echebe mkpụrụ ndụ megide mmụba nke nwere ike ibute kansa.
SIRT1 nwere ike igbochi gị mmebi na mmebi nke sel, nke na-aga n’ihu mgbe ị na-etolite.
Ọtụtụ ọmụmụ egosila na pterostilbene chemical compound na-ebelata mbufụt nke TNF-alfa (tumor necrosis factor-alfa) na-achịkwa. Ihe nrụgide Oxidative na-ebute mbufụt; Pterostilbene na-egbochi interleukin-1b na TNF-alpha site na ibelata ụdị oxygen ndị na-emeghachi omume.
Compoundlọ a na-echebekwa nrụgide n'ime akụkụ nke igwe ọrụ sel a maara dị ka ER (endoplasmic reticulum). Na nyocha, mgbe ekpughere oghere nke mkpụrụ ndụ ọbara na Pterostilbene ntụ ntụ, ngwakọta ha azaghị ihe mgbaàmà mbufụt, ha apụtaghị na ọkụ.
Usoro Pterostilbene nke ime ihe; Mmetụta Ọrịa Ọrịa Cancer
N'ụzọ dị ịtụnanya, n'agbanyeghị na-ebelata nrụgide ER (endoplasmic reticulum) na mkpuchi nke arịa ọbara, Pterostilbene na-akwalite nrụgide na endoplasmic reticulum nke akpịrị mkpụrụ ndụ kansa. Ya mere, ọ na - emebi mkpụrụ ndụ cancer ma na - echebe nrụgide oxidative na sel ndị nwere ahụ ike.
Na mkpụrụ ndụ cancer ma ọ bụ ụbụrụ (glioma) mkpụrụ ndụ kansa, Pterostilbene na-agbada Bcl-2 ma bulie Bax; mgbanwe ndị a na - eme ka mkpụrụ ndụ “igbu onwe” nke na - eme ka mkpụrụ ndụ azụ ma ọ bụ ụbụrụ nwee ike ịnwụ.
Mkpụrụ ndụ cancer na-eji okporo ụzọ akpọrọ Notch-1 mee ihe iji gbochie onwe ha ịme ọgwụ ọgwụ chemotherapy, gụnyere oxaliplatin na fluorouracil. Pterostilbene na-egbochi notch-1 na-amigide na-eme ka ọnụọgụ ọnụnụ ndị ahụ nwee mmetụta ọsọ ọsọ na ọgwụgwọ site na mmiri ọgwụ.
Pterostilbene na-ebelata mmepụta nke ọtụtụ ọgwụ na-akwalite ọrịa kansa, gụnyere MUC1, b-catenin, Sox2, NF-κB, na CD133. Ngbakwunye mmetụta ndị a na-ebelata mbufụt ma mee ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume maka uto mkpụrụ ndụ cancer.
Pterostilbene nwere ike nwaa mpaghara mpaghara hippocampus nke ụbụrụ na-ahọrọ. N'ebe a, ọ na - akwalite CREB (protein nzaghachi na-ejikọ protein), BDNF (ihe na-akpata ụbụrụ neurotrophic), yana MAPK (protein mitogen-activates protein).
Ihe nchebe atọ a nyere aka neurons n'ịba ụba, na-eto ma na-aza nke ọma na gburugburu ha. Nkpagbu ọgwụ SNRI na-achọkwa ụzọ ndị a.
Pterostilbene na - akwalitekwa protein nke a na - akpọ Nrf2 na hippocampus, nke na - akwalite ngosipụta nke protein antioxidant.
Pterostilbene na-egbochi ahụ megide ọrịa Alzheimer site na ịchebe ụbụrụ megide beta-amyloid (Aβ). Ọ na-eme nke a site na itinye Akt na PI3K, protein abụọ na-akwado uto neuron, ebe nchekwa, na mmụta.
3. Pterostilbene ntụ ntụ bara uru
A tụlere n'okpuru ebe a bụ atọ kacha mkpa pterostilbene ntụ ntụ uru;
i. Pterostilbene dị ka nootropics
Ka anyị na-eto, usoro echiche ọhụrụ na - esikwu ike n’usoro, icheta ihe na - esikwu ike ịnweta. Enweghị ike ịrụ ọrụ ọgụgụ isi kwesịrị na-ebelata kwa. Pterostilbene nwere ike inye aka n'ịmepụta mpaghara agbatịghachi nke akwara afọ ọ bụla.
Pterostilbene bụ nootropic siri ike, nke na-enyere aka na ntụrụndụ na nkwalite cognition. A na-ewere ya ugboro ugboro tupu arụ ọrụ tupu ike ya inye aka na vasodilation nke arịa ọbara. Ya mere, na-enye mmetuta yiri nke ihe ndị ọzọ na-eme ka nitric oxide na-eme ka ihe ndị ọzọ dị mma.
A na-ekwenye uru Pterostilbene nootropic n'ihi ike ya iji bulie ogo nke dopamine. Na mkpanaka, Pterostilbene wedata nchekasị ma mee ka ọnọdụ ahụ ka mma. N'ime nnyocha metụtara òké ndị agadi, ihe mgbakwunye pterostilbene welitere ogo dopamine na cognition enwekwukwa. Ọzọkwa, mgbe e mere ka Pterostilbene dị na oke 'hippocampus' nke oke, ebe nchekwa ha na-arụ ọrụ bịara ka mma.
Na nyocha ọzọ metụtara oke, Pterostilbene mekwara ka mkpụrụ ndụ ọhụrụ dị elu na hippocampus. Ọzọkwa, mkpụrụ ndụ mkpụrụ osisi amịpụtara sitere n'ụkpụrụ ụmụ oke na-eto ngwa ngwa mgbe ekpughere ha Pterostilbene.
Dị ka ọmụmụ cell si kwuo, pterostilbene ntụ ntụ na-egbochi MAO-B (monoamine oxidase B) ma na-eme ka dopamine dị na ụbụrụ anyị. Omume a yiri ọgwụ na-agwọ ọrịa Parkinson, dịka rasagiline, safinamide, na selegiline. N'ime nnyocha, Pterostilbene na-echekwa akwara ozi megide mmebi metụtara ọrịa AD (ọrịa Alzheimer).
A kwenyere na ikike ịchịkwa nchekasị Pterostilbene bụ n'ihi ike ọ nwere igbochi monoamine oxidase B. N'ime otu ọmụmụ ihe, Pterostilbene gosipụtara ọrụ mgbakasị ahụ na ọgwụ abụọ na otu mg / kg. Ọrụ nchegbu a nke ogige ahụ yiri nke diazepam na otu na abụọ mg / kg na EPM.
ii. Pterostilbene na Ibu
Otu nnyocha nyochara ikike nke Pterostilbene nwere ike ijikwa oke ibu gosipụtara na enwere njikọ dị n'etiti mmechi pterostilbene na njikwa ibu. Ndị ọkà mmụta sayensị ahụ kwenyere na ntụ ntụ Pterostilbene nwere ike imetụta ọkwa oke abụba n'ihi ikike ya belata lipogenesis. Lipogenesis bụ usoro nke ịmepụta sel abụba gabigara ókè. Pterostilbene nwekwara na - akwalite oke abụba ma ọ bụ oke abụba n’imeju.
N'ime nnyocha metụtara ndị toro eto nwere cholesterol dị elu, otu ndị sonyere na-a takingụghị ọgwụ cholesterol tụfuru ibu mgbe ha na-ewere ihe mgbakwunye pterostilbene. Nsonaazụ ndị a ghọrọ ihe ịtụnanya nye ndị nyocha ahụ n'ihi na ebumnuche nyocha a abụghị iji tụọ mgbakwunye pterostilbene dị ka enyemaka ọnwụ.
Ihe omumu anumanu na akwara gosiputara na pterostilbene nwere ike inye aka mee ka nnabata insulin mara. Ihe Pterostilbene na-eme bụ na ọ na-egbochi usoro ịtụgharị sugne ịbụ abụba. Ọ na - egbochi mkpụrụ ndụ abụba na - eto ma na - aba ụba.
Pterostilbene na - agbanwe gut flora mejupụtara na eriri afọ ma na - enyere aka na mgbaze nri.
Mkpuchi nke Pterostilbene nyere nwere ahịhịa na -emekwu ahụ ike na nnukwu agbam ume na Akkermansia muciniphila. A. muciniphila bụ ụdị nje na-apụta na-egbochi mbufụt dị ala, oke ibu, yana ọrịa shuga. Nje bacteria a abụrụla nnukwu ihe nyocha gbasara probiotic n'oge na-adịbeghị anya.
iii. Pterostilbene na-akwalite ọgbụgba
Pterostilbene mgbochi ịka nká na-ejikọ ya na kemịkal bioactive nke a maara dị ka Trans-pterostilbene. E gosipụtawo ọgwụ a iji belata mbufụt, gbanwee mmetụ uche, ma mee ka shuga dị n'ọbara dịrị. Na vivo na in vitro ọmụmụ ihe na-akwado nkwado Pterostilbene na ọgwụgwọ. Chemical a na-arụkwa ọrụ dị ka mgbochi caloric mimetic, nke na-akpali ahụ ịtọhapụ biochemicals, gụnyere adiponectin nke na-ebelata usoro nke ịka nká ma na-akwalite ọgwụgwọ.
Ihe amara a maka ịka nká bụ ihe a na-ahụkarị maka ichebe megide ọrịa ndị metụtara afọ, wee si otú a na-agbatị ndụ. Na mkpanaka, obere doses nke kemịkalụ ala ndị a belata ihe mgbaàmà metụtara ịka nká. Ọmụmụ ihe ahụ tụrụ aro na iri ọtụtụ nri pterostilbene dị ka mkpụrụ osisi bred nwere ike igbu oge ịma aka ahụike metụtara agadi, gụnyere dementia na kansa.
Obi abụọ adịghị ya na Pterostilbene na resveratrol nwere njikọ chiri anya. A maara Resveratrol dị ka kemị bioactive na mmanya uhie na mkpụrụ vaịn.
Uru ahụike nke resveratrol yiri nke Pterostilbene ma gụnye nchebe megide Alzheimer, mmetụta anticancer, nkwalite ntachi obi ike, mmetụta mgbochi mkpali, ike ịrịa ọrịa shuga, yana uru obi.
Pterostilbene bụ nke yiri nke mmiri ọgwụ resveratrol, mana nyocha ekwuola na Pterostilbene nwere ike karịa ike resveratrol na njikwa ụfọdụ ọnọdụ ahụ ike. Pterostilbene egosiputala ikike dị ukwuu n'ịkwalite ọrụ ọgụgụ isi, ahụike obi, na ọkwa glucose.
Ndụ ọkara nke Pterostilbene dịkwa mkpụmkpụ karịa ọkara nke resveratrol. Pterostilbene nwere okpukpu anọ karịa ngwa ngwa karịa ka ọ na-esite na mgbari nri na anụ ahụ karịa resveratrol. Na usoro a, nke a nwere ike ịme Pterostilbene dị irè karịa ọtụtụ oge karịa resveratrol. Agbanyeghị, ekwesịrị imekwu ọmụmụ iji kwado nke a.
A na - ejikọtakwa Pterostilbene na resveratrol mgbe ụfọdụ iji nye mgbakwunye na ntinye capsule. A kwenyere na mgbakwunye a ga-enwe ike karịa ka ọ na-agakọ uru nke ihe abụọ ahụ.
5. Ihe mgbakwunye Pterostilbene
Obi abụọ adịghị ya na iji nweta uru kachasị mma nke Pterostilbene, a na-atụ aro ka ị were ya dị ka mgbakwunye ntụ ntụ. Pterostilbene mmezi na-azụ ahịa n'ọtụtụ ụlọ nri na eke nri na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-ahụ maka usoro nri. Nwekwara ike ịchọta ndị na-emepụta pterostilbene n'ịntanetị.
Ihe mgbakwunye Pterostilbene dị n'ụdị capsules, yana ọtụtụ usoro onunu ogwu. Shouldkwesịrị ịgụ nke ọma ma ọ bụ akara ahụ ma rịba ama ego ole Pterostilbene dị na capsule nke ọ bụla tupu ịzụta ya. Ihe a di nkpa n’ihi na usoro onunu ogwu di iche iche nwere ike igosiputa ihe di iche.
Ọzọkwa, ụfọdụ usoro pterostilbene nwere ike ịdị elu karịa nke nyochaworo n'ime mmadụ. Usoro onunu a na-enwetakarị n'etiti 50 mg na 1,000 mg na capsule ọ bụla.
Dịka anyị kwuru na mbụ, a na-enweta ọgwụ mgbakwunye, na nchịkọta ndị kachasị ewu ewu bụ Pterostilbene na resveratrol. Pterostilbene jikọtara ya na curcumin, tii akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, astragalus, na ihe ndị ọzọ sitere n'okike.
Nwekwara ike ịchọta ude mmanụ anwụ nwere Pterostilbene n'agbanyeghị na nke a adịkarịghị. Egoghi oke Pterostilbene iji chebe gị nke ọma na ọrịa cancer anụ, mana ọ nwere ike inye nchebe ọzọ.
6. Ebee ka ị ga-ahụ Peterostilbene ntụ ntụ kacha mma?
Ọ bụrụ na ị na-achọ pterostilbene dị elu maka ọrịre, mgbe ahụ ị nọ ebe kwesịrị ekwesị. Anyị bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu, nwee ihe ọmụma, na ahụmahụ pterostilbene emepụta na China. Anyị na-enye ngwaahịa dị ọcha ma dị mma nke a na-anwale mgbe niile site na ụlọ nyocha nke atọ nke ụwa iji hụ ịdị ọcha na nchekwa. Anyị na-anapụta iwu n'ofe US, Europe, Asia, na n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta pterostilbene ntụ ntụ nke kachasị mma enwere ike, kpọtụrụ anyị ugbu a.
Rimando AM, Kalt W, Magee JB, Dewey J, Ballington JR (2004). "Resveratrol, pterostilbene, na piceatannol na vaccinium mkpụrụ osisi". J Agric Nri Chem. 52 (15): 4713–9.
Kapetanovic IM, Muzzio M., Huang Z., Thompson TN, McCormick DL Pharmacokinetics, bioavailability ọnụ, na profaịlụ metabolic nke resveratrol na dimethylether analog, pterostilbene, na oke. Nne nne. Aclọ ọgwụ. 2011; 68: 593–601.
Nchedo nke trans-resveratrol synthetic dị ka ihe oriri akwụkwọ dịka Iwu (EC) No 258/97 ″. EFSA Journal. European Security Safety Authority, EFSA Panel na Ngwaahịa Dietetic, Nutrition and Allergies. 14 (1): 4368
Becker L, Carré V, Poutaraud A, Merdinoglu D, Chaimbault P (2014). "MALDI uka onyogho onyonyo maka ebe nke resveratrol, pterostilbene na viniferins na akwukwo ahihia vape". Molekul. 2013 (7): 10587-600.
1.Gịnị bụ Pterostilbene?
Usoro usoro 2.Pterostilbene
3.Pterostilbene ntụ ntụ bara uru
6. Kedu ebe ịchọta Peterostilbene ntụ ntụ kacha mma?